Sideed ugu qasbi kartaa dowladaha inay beddelaan iyagoo iska indho tiraya tirada guud? : Martin Vrijland
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	on 8 November 2019	• 8 Comments
Waxaan aragnay mudaaharaadyo badan toddobaadyadii la soo dhaafay waana iska cadahay in dad badan oo beeraley ah, kuwa wax dhisa iyo kuwo kale oo badan oo xanaaqsan. Haddii wax sidan oo kale ahi dhacaan, waxaad arki doontaa in siyaasiyiinta iyo warbaahinta ay sameyn doonaan xakameyn burbur. Barnaamijyada telefishanka sida kuwa Jeroen Pauw qaasatan waxay masters u yihiin xakameynta waxyeeladaan iyo xakameynta aragtida.
Shaqaalaha daryeelka dhalinyarada waa in laga ilaaliyaa rabshada waalidiinta xanaaqsan halkii waalid cadhaysan laga ilaalin lahaa xadgudubyada hareeraha mashiinka lacag-ku-wareegga ee dad badani ku kasbadaan noloshooda, badiyaa iyagoon tixgelinaynin dhibaatada shaqsiyeed. Askarta waa in laga ilaaliyaa siyaasiyiinta aaminsan in bambo gacmeedku runtii yahay dil. Haddii beeraleydu xanaaqsan yihiin, xitaa wargeys borotiin ah oo ah nooca loo yaqaan '1' wuxuu diyaar u yahay inuu soo sheego in dad badan oo Nederland ah ay aaminsan yihiin in gobolka uu u jabiyey tallaabooyinkiisa cagaaran. Hadday dhammaantiisu gacanta ka baxdo markaa waxaad doonaysaa inaad naftaada xidho. Waxay umuuqataa in dad badan oo reer Dutch ah ay toostaan ​​oo keliya markay garaacdo boorsadooda gaarka ah ama shaqo aamin ah. Bini-aadamnimadu badanaa waxay umuuqataa inay ka dambeeyaan qofka shaqadiisa ama meeshiisa, laakiin haddii qof boorsadiisa ama amaankiisa la garaaco, waxaa ugu wanaagsan in la kaco.
2019 Gaar ahaan, waa sanadka ay dhammaan kooxaha xirfadleyda ah ee si toos ah ama si aan toos ahayn uga shaqeynaya gobolka u muuqdaan kuwo loo hanjabayo, la weerarayo ama la dili doono. Ma ahan oo keliya qareennada, laakiin hadda sidoo kale baarayaasha, shaqaalaha daryeelka dhalinyarada iyo saxafiyiintu waa inay helaan ilaalin gobolka. Taasi ma laga yaabaa inay wax ka dhahdo inta argaggixiso ka dhex socota bulshada dhexdeeda sidaa darteedna inta silica shaqsiyadeed la keeno? Saxafiyiintu waa dhibanayaal waxa loogu yeero baandooyinka dambiilayaasha, laakiin taasi waxay u muuqataa ugu horayn in loogu ogolaado in loo ogolaado dacaayadaha xirfadleyda ah inay sii wadaan inay soo saaraan wararkooda been abuurka ah ee aan sharciga lahayn. Aan sal lahayn Hagaag, dabcan si fiican ayaa loo aasaasay, sababta oo ah Thanks to sheekooyinka suxufiyiintaan iyo maareeyayaasha aragtida aragtida sannadihii la soo dhaafay, waxaan hadda heysanaa marqaatiga qarsoodiga ah ama isha aan lagaranaynin oo macno ahaan wax walba lagu sameyn karo oo maxkamad la soo taagi karo warbaahinta hadda waxay bixisaa xannibaadda dadweynaha.
Haddii arrimuhu wax xoogaa gacanta ka galaan, waxaad had iyo jeer abaabushay mucaaradnimo qaab ururro shaqaale iyo kulammo siyaasadeed. Waxaad u badan tahay inaad xasuusato sida Wim Kok uu siyaasad uga noqday hogaamiyaha ururka shaqaalaha. Ururada shaqaaluhu waxay u joogaan inay lahaadaan iska caabin ka dhex dhaca bulshada si ay u xakameeyaan uumiga qaab habaysan loo xukumay. Isla sidaas oo kale ayaa loo adeegsadaa xisbiyada siyaasadeed iyo raggoodii hore. Dhadhamin kasta oo bulshada dhexdeeda ah waxaa lagu qiyaasi karaa iyadoo la adeegsanayo nidaamyada xogta weyn ama tirooyinka aragtida waxaana saameyn lagu yeelan karaa raadiyaha, TV-ga iyo ciidammada warbaahinta bulshada ee hoggaaminaya wadahadalka. Haddayse hanjabaad ku tahay inay waxoogaa qaldamo, waxaad u dirtaa siyaasad qaali ah wasiirkiisa qaaliga ah oo ku habboon oo ay weheliyaan kaamirooyin badan si ay dadka uga dulqaadaan hadal xiiran, muujinaya waxa loogu yeero faham, laakiin farriinta halkaas hal hadhaagii "waa lama huraan waana in aan sidaa yeelnaa". Dhab ahaantii ma waxaad u maleyneysaa in Mark Rutte xitaa uu ka walaacsan yahay boorsada jeebkaaga ama wanaaggaaga? Dhab ahaantii ma u maleyneysaa in xitaa hal siyaasiya ama hal maareeye aragti aad u mushahar badan uu ka welwelsan yahay wanaaggaaga? Maya.
Markaa hadaan rabno inaan aasaas ahaan wax ka badalno bulshada dhexdeeda, markaa ma aha inaan kaliya qabsanno booska haddii ay nafsadeena is qabato, laakiin markaa waa waqtigii aan bilaabi lahayn inaan aasaas ahaan ka eegno waxa khaldan. Taas awgeed waxaad runtii u baahan tahay inaad fiiriso wixii ka dambeeya warbaahinta iyo siyaasadda. U fiirso sankaaga. Tani waxay inta badan la xiriirtaa isbeddelada aasaasiga ah ee nafteena, sida aragtidayada dunidu ay tahay iyo sida ugu fudud ee aan u ciyaarno. Haddii aan bilowno inaan fiirino dhammaan qaababkii aan ku ciyaarnay oo aan wax uga bedelnay, waxaan sidoo kale u bedeli karnaa arrinta heer aasaasi ah. Taasi Suuragal ma aha in shaashadda la geliyo tipp-ex. Tan darteed waa inaan sheegnaa sababaha mid mid. Waa inaan sameynaa khiyaanada iyo khiyaanada lakab oo dhan si aad u aragto barnaamijka oo aad uga leexato khiyaanadaas iyo khiyaanadaas. Asal ahaan kama hadlayno kaliya siyaasiyiinta, maamulayaasha aragtida warbaahinta (sida Jeroen Pauw, Matthijs van Nieuwkerk, iwm), laakiin sidoo kale waxaan ka hadlaynaa mucaaradka la xakameeyay ee xagga siyaasada, ururada shaqaalaha iyo qaab ku dhex abuur bulshada.
Buuggayga cusub waxaan kaga wada hadlayaa dhammaan heerarka khiyaanada waxaanan la imid xalka si cad loo dejiyay. Waxaa la joogaa waqtigii si dhab ah wax looga qaban lahaa oo runtii waxqabadku u bilaabmi lahaa iyadoo la arko dhammaan heerarkii barnaamijyada ee run ahaantii aan u maleyneyno inaan aragnay. Miyaad runtii dooneysaa inaad iibiso buuggaaga Vrijland? Waxaan ku qorayay boggan shabakadda 7 iskaa wax u qabso sannado badan taasna aniga ayay igu kacday wax badan. Si kastaba ha noqotee, sifiican ugama soo koobi karo sanadihii 7 sanadihii marka loo eego buug, waana sababtaas sababta aan u qaatay dhibaatada. Gaaban oo illaa heer ah, laakiin quraarad cad oo qoran oo jacayl ku qoran. Waxaan geliyaa tamar badan, sababtoo ah aniga aragtidayda wax run ahaantii waa in la badalaa. Waxaa la joogaa xilligii isbadal bulsheed oo weyn taasina waxay imaan kartaa oo keliya haddii indhuhu si sharaf leh ugu furnaadaan qaab kasta. Waxaan sameeyay intii karaankey ah. Fadhiiso oo dhaqaaq. Ma ka qaybgashaa
Geert Wilders oo ah mucaaradka gacanta ku haya
Thierry Baudet ayaa Netherlands ka dhigeysa mar kale mar labaad! Dhab ahaan!
Doodda u dhexeeya Mark Rutte iyo Thierry Baudet waxay caddaynayaan inaadan codeynin
8 November 2019 ee 15: 19
Waxaan u malaynayaa in mudaaharaadyadii halkaa ka dhacay run ahaantii ay aad u yaraayeen.
Muxuu mudaaharaadku soo saaray! Nada. Haddii aad ka mudaaharaato waa inaad runtii sii wadataa ilaa intaad wax ka gaadheen ka dibna caddaan madow ku caddahay. Haddii kale 'haajiriinta' muhaajiriinta ah 'way kugu qosli doonaan oo waxay horay u qaateen mudaharaadkan ugu yar tixraac qoraalkooda ah in maalin mudaharaad ah.
8 November 2019 ee 16: 06
Xaqiiqdii, waxay u badan tahay inay leeyihiin pawn ay ku leeyihiin ururka ..
"Habka ugu wanaagsan ee mucaaradka loo xakameeyo waa inaad adigu hogaamiso naftaada"
8 November 2019 ee 16: 34
Taasi waa sax, taasi waa sida ay u shaqeyso, laakiin sidaan horay u sheegay, "nasiib wanaag waxaan ku nool nahay" qaanuunka sharciga. " Qufac.
Isbarbar dhig xaalada hada sida isku dhafka seenyada George Orwell iyo dunida geesiga ah ee cusub ee Huxley. Isku darka Nice, is biirsaday, waa inaan la hilmaamin. Cheers Guys waxay sii wadeysaa isticmaalka qoraalkaaga.
12 November 2019 ee 00: 33
Markii aan booqday waalidkey waxaan ku arkay waxyaabaha soo socda telefishanka:
Muddo ayay qaadatay in aan fahmo sababta ay u jirtay nacayb iyo shucuur noocaas ah (iyo aniga aragtidayda aan khibrad lahayn) oo ka jawaabaya mowduucan Renske Leijten. Ugudambeyntii waxay la xiriirtaa koox yar oo ka mid ah dadka 8500 oo ay aad uga careysiiso, laakiin waxaa jira xadgudubyo waaweyn oo ka jira dowladda. Ilaa daqiiqaddii 22: 05 muuqaalka xilligan xaadirka ah waxaa lagu celceliyay qaab beddelid ah soo bandhigaha: "Laakiin waa sidee sida ay u xun tahay tan, runtii tani waa dowlad ka soo horjeesata shacabkeeda". Tan waxaan ula jeedaa taas waa in dawlad ay tahay inay difaacdo muwaadiniinteeda laakiin ay ku guul darraysatay sidaas.
Xagee ayaan ka nimid wasiir caynkaas oo cod dheer ku dhawaaqay? "Dawladu waxay u joogaa inay difaacdo muwaadiniinteeda si weyna ugu guuldareysatay.
Mararka qaarkood waxaan jeclahay in aan jeclaado sida hufan ee hababka loo isticmaalo. Waalidkey gebi ahaanba waxay ku sugnaayeen "ceebi !!" qaabka. Mararka qaarkood waxaan jeclaan lahaa inaan u sharaxo waalidkeyga sida dareenkooda looga weeciyo waxa run ahaan u socda iyadoo si qotodheer ugu socdo mawduuc aad u yar laakiin qiiro leh.
Isla waqtigaas waan joojiyay iskudayadaas. Haddii cilmi nafsiga uu muuqaalkiisa muujiyo (lagana heli karo taleefanka 11-11, waa wax fiican, labo jeer nambarka waalan, lache!) Waxaan ka baqayaa in laygu yeedhi doono marxaladda hore ...
12 November 2019 ee 00: 44
Gaadiidka ku habboon waa lama huraan maxaa yeelay dadka aan galin fal dambiyeed kuma jiraan gaariga booliska. Intaa waxaa sii dheer, ambalaaska badanaa looma baahna kiiskan. Iyaga oo adeegsanaya gaadiid haboon, dadkani waxaa loo qaadaa si xirfad leh meel aamin ah, farxad leh, oo aan dhaleeceyn lahayn. Kaabis ayaa lagu abaalmariyay duulimaad ku habboon gaadiidka ZonMW muddo hal sano ah. Inta lagu jiro muddadan, waa la kormeeri doonaa inta jeer iyo goorta la adeegsanayo gaadiid ku habboon. Iyo sidoo kale sida tan ay u soo martay dadka lagu qaado: dadka dhaqan xun iyo kuwa ay jecel yihiin. ”
Kaalay George Orwell ... miyaad tan ugala jeeddeen khudbad cusub?
Waxaa lagu geeyay meel aamin ah, farxad leh, oo ah mid aan loo dulmarin, si xirfad leh "
12 November 2019 ee 00: 51
Xanuunka nafsaaniga ahi waa sharraxaadda meeleynta ee degmooyinka ay dowladdu siisay si ay u xaqiijistaan ​​hanaan shaqo oo habboon oo loogu talagalay 1 Oktoobar 2018 marka loo eego dadka bartilmaameedsada kooxda dabeecadda jahwareerka leh.
12 November 2019 ee 01: 13
Damn, Ma ogi in waxa caynkaas ahi ay hareeraha ka socdaan! Nasiib wanaag waxaan ku noolahay galbeedka dalka!
Oraah ka soo xigtay qodobka kore:
Si kastaba ha noqotee, booliisku waa inay si joogto ah u kormeeraan maskaxda. Markaa wakiil wakiil ayaa u kaxeeya nabadgelyada shaqaalaha. Sannadkii labaad ee cilmi nafsiga uu maamulo, ayaa koror yar oo gardarada ah la arki karaa. "Taasi waa dabcan sidoo kale sababta oo ah waxaan wadnaa inbadan, laakiin boolisku sidoo kale way ogyihiin meesha laga helo," ayuu yidhi Hendriks. "Iyo sida bulshada dhexdeeda, waxaa sidoo kale kor u kacay gardarrada anaga nala jooga."
Deriskayga hore wuxuu u shaqeeyey sidii walaal ambalaas cimrigiisa oo dhan. Waxaan weydiiyay bal in gardarada ka dhanka ah shaqaalaha ambalaaska ay korortay sanadihii la soo dhaafay. Jawaabtiisu way cadahay: “Maya, waxay sii jirtay isla sannadihiias oo dhan. Farqiga ayaa ah in loo mahadceliyo smarthpone iyo warbaahinta bulshada, asxaabteyda ayaa mararka qaar la wargaliyaa ka hor intaanan ku soo noqon xeradii.
12 November 2019 ee 10: 19
Haa, dad badan ayaa horay loogaga qaaday gGZ gulag
« Waa maxay dhibaatada loo yaqaan 'nitrogen', muxuu beeraleydu uga cabanaayaa maxaase xawaaraha u yaraanaya?
Tallaabada koowaad waa calaamadaynta, tallaabada labaad waa ka saaritaan: badhanka tallaalka »
Guud ahaan Wadarta: 13.902.301